/Blog/garari/Flibanserin Inobatsira Sei Mukadzi sePabonde Hormone
Posted on 11 / 11 / 2019 by Dr. Patrick Young akanyora garari.
Kusangana pabonde kunofungidzirwa kuti kwakajairika muvarume, uye kune rombo rakanaka kwavari; kune huwandu hwesarudzo dzekurapa kusarudza kubva kwavari kubva kuViagra, Cialis, uye ED zvinodhaka. Vanewo nemahara anorapwa kubatsira kudzoreredza yavo bonde drive. Vakadzi vanonzwa kusiiwa mune izvi. Neraki, ivo vane sarudzo zvakare. Ivo havachafanirwa kurwisa nekurasikirwa nezvido zvepabonde, dambudziko rakatungamira mukukanganisa kukuru kwehukama. NaFlibanserin (167933-07-5), vane nzira yekukurudzira kufarira zvepabonde.
Chii chinonzi Flibanserin
Flibanserin (167933-07-5), inotengeswa pasi pezita Addyi mushonga unoshandiswa kurapa nenyaya dze premenopausal muvakadzi, kunyanya avo vane hypoactive zvepabonde chishuwo kusagadzikana. Ndeipi s hypoactive zvepabonde chishuwo chishuwo chaunobvunza? Ichi chimiro chinoratidzirwa nezvido zvepasi zvepamoyo, zvinogona kukonzera kuomarara kana kushushikana. Uku kusagadzikana hakufanirwe kuve semhedzisiro yekudyidzana nyaya dzehutano kana matambudziko ehukama. Zvakare, haisi nyaya inouya semhedzisiro yemushonga kana kushandiswa kwezvinodhaka zvinhu.
Iwe unofanirwa kucherechedza izvozvo Flibanserin haisi kuitirwa vakadzi vakatosvika pakuenda kumwedzi. Zvakare, haina kukodzera kune varume. Mushonga uyu unopihwa pasi pechirongwa chakakosha, zvichireva kuti munhu anofanirwa kunyoreswa muchirongwa ichi asati awana mushonga. Iyi purogiramu inobatsira vashandisi kuti vadzidze zvakanakira uye nengozi dzinouya nekushandiswa kwemushonga uyu, uye nenzira iyi, vanogona kuita sarudzo yakanaka kuti yakanakira ivo here kana kuti kwete. Zvakare, vashandisi vanofanirwa kuziva kuti uyu mushonga haufanire kusevenzeswa seanokuridzira bonde. Panzvimbo pezvo, zvinorehwa kubatsira avo vane kuderedzwa kuchiva zvepabonde pasina chikonzero chiri chose.
Flibanserin inoshanda sei kune vakadzi?
Vakadzi vazhinji vanokahadzika kushandisa ichi chigadzirwa uye havana chokwadi kana vachichifanira kuchishandisa kana kwete. Icho chikonzero chiri, ivo vari kutya kuti zvingasashande. Chokwadi ndechekuti, kunyangwe ichi chigadzirwa chichi shanda, hachishande munhu wese. Wese munhu anozvibata nenzira dzakasiyana, uye nekuda kwekuti zvakashandira mumwe munhu hazvireve kuti zvichakuitira nenzira imwechete. Nekudaro, 60% yeavo vaishandisa mushonga uyu vakapa kuongororwa kwakanaka uye vakataura kuti mushonga uyu wakapa mibairo yakanaka kwazvo.
Mubvunzo mukuru, zvisinei, ndekuti; chinoshanda sei? Iko kwanga kusati kwave nekuwana kwakajeka kwekutsvaga pane iyo michina inoshandiswa nemushonga uyu kuburitsa mhedzisiro. Asi, vaongorori vauya nefungidziro, zvichitevera chokwadi chekuti serotonin inokodzera kudzivirira kuita zvepabonde, uye vakawana kuti Flibanserin (167933-07-5) inoderedza chiitwa chesaotonin muuropi. Izvi, mukudzoka, zvinodzosera mukadzi chishuwo chebonde. Zvakare, mushonga uyu une zvimwe zvisina kunangana norepinephrine uye dopamine, iyo zvakare yakabatana nezvakawedzerwa zvepabonde zvido.
Kusiyana neViagra uye mimwe mishonga ine hukama pabonde nevarume, uyu mushonga unonyanya kushanda nekutarisa huropi. Inoita saizvozvo nekuwedzera mazinga eurotransmitters anoshandiswa nouropi hwako kukurudzira kufarira pabonde.
Kazhinji kacho, mushonga wacho unosundira pasi mabhatani maviri epfungwa akakosha ayo anosimudzira zvishuwo zvepabonde uku uchidzivirira maanorotransmitters ayo anomiririra kudzvanyirira kufarira kwevakadzi. Mushonga uyu wakaunzwa mumusika kumashure mu2015 mushure mekunge FDA yawubvumidza kurapwa kwewakawana HSDD mune vakadzi.
Kunyangwe pasina ruzivo rwakajeka rwekuti vapi vakadzi vanogona kubatsirwa kubva pakurapwa uku, zvakachengeteka kutaura kuti mushonga unoshandiswa kubata zvisikwa zvakarasika zvepabonde zvido. Izvi zvinoreva kuti zvinongoshanda chete kana pasina chaicho mutengo wepamoyo wakarasikirwa nezvido zvepabonde, sekurasikirwa kwekufarira muukama kana nekuda kwemimwe mhedzisiro yezvinodhaka. Zvakare, hazvisi kune avo vari kubata nemwedzi mhedzisiro. Mushonga uyu wakaedzwa kune vakadzi vane HSDD. Vakadzi vese vaive vese mune hurefu hwakagadzikana hukama, zvichireva kuti dambudziko ravo raisave nekuda kwekudyidzana kusingafadzi. Vaive nechishuwo chebonde munguva yakapfuura uye vainetseka kuti vairasa zvishoma nezvishoma uye vaitsvaga nzira yekudzosera.
Vakadzi ava vakasangana nenyaya iyi kweanenge makore mashanu, uye vaiti ivo havana zvido zvebonde kune vavanoda kana mumwe munhu. Pamusoro pe50-60% yevakadzi vakapindura zvakanaka pakurapwa, vamwe vakaita zvisirizvo. Vamwe vakawana chishuwo chebonde chevamwe vanhu kwete vavanofambidzana navo, uye saka hapana ruzivo rwakajeka rwekuti muviri wako uchaita sei pakurapwa.
Mumwe mubvunzo unowanzo bvunzwa pasi pekuti mushonga unoshanda sei uye kuti zvinotora nguva yakareba sei kuona mhinduro. Zvekare, chimiro ichi chinogona kusiyana kubva kune mumwe munhu kuenda kune mumwe, kunyanya nekuda kwekuti zvinosangana zvakasiyana. Nekudaro, iyo miedzo inoratidza kuti zvinotora kusvika kumavhiki mana kuti uone yekutanga mhinduro uye kusvika kumavhiki gumi nemaviri ekuwana mibairo. Iwe, zvisinei, iwe unofanirwa kuishandisa nenzira kwayo kuti uone mahedzisiro.
Mushonga wakakurudzirwa nenyanzvi ndeye 100mg, iyo inofanirwa kutorwa nemuromo, kamwe chete pazuva. Zvakanaka kana ukashandiswa panguva yekurara kana yekuzorora nguva. Izvi zvinodaro nekuti kutora mushonga uyu panguva dzekushanda kana muviri wako uchinge uchinge wakuisa munjodzi yekukudziridza syncope, central system system kushushikana, hypotension, kana kuti unogona kupinda mutsaona.
Chii chinoitika kana ukapotsa dosi?
Ukapotsa Flibanserin dosage panguva yekurara, zvinokurudzirwa kuti umirire kusvika panguva yekurara inotevera utore mushonga.
Kuwedzeredza mushonga uyu hazvireve kuti iwe unowana nekukurumidza mhedzisiro. Panzvimbo iyoyo, zvinongozounza iwe chete madhara. Zvinokurudzirwa kuti kana waita tsaona zvakanyanya kana kuti ukafungidzira kuti wakazviita, tsvaga kurapwa nekukurumidza.
Iwe unorega riini kushandiswa kwake?
Iwe unofanirwa kurega kushandiswa kwemushonga uyu mushure memavhiki masere ekushandiswa pasina kugadziriswa. Sezvambotaurwa, mushonga uyu unoshanda zvakasiyana kuvanhu vakasiyana. Vamwe vanogona kutanga kuwona mhedzisiro nekukurumidza, nepo vamwe vangatora nguva. Nekudaro, hazvifanirwe kutora iwe kupfuura mavhiki masere kuti uone kunyatsogadziridzwa. Kana izvo zvikaitika, zvinoratidza kuti chigadzirwa hachina kukodzera iwe, uye zviri nani kana ukasiya kushandiswa.
Zvichienderana nemamiriro ezvinhu, iwe unogona kushandura dosage yako kuti ive yepakati kana yakasimba zvichienderana neCYP3A4 inhibitors. Zvinokurudzirwa kuti kana iwe urikusvitsa kushandiswa kweFlibanserin kunoenderana nehuremu kana kusimba CYP3A4 inhibitor, uye ipapo iwe unofanirwa kutanga mushure memavhiki maviri kubva kune yekupedzisira dosage yeCYP3A4 inhibitor. Kana iwe uchida kuchinjisa iyo CYP3A4 inhibitor sekushandiswa kweFLIBANSERI, iwe unofanirwa kuzviita mazuva maviri mushure meiyo yapfuura Flibanserin dofo.
Iwe unofanirwa kucherechedza kuti mushonga uyu wakanaka kune avo vakawana HSSD, zvichireva kuti nyaya yacho inoitika kune vanhu vanga vasina kana hutano hwehutano. Zvakare, dambudziko harifanirwe kuve semhedzisiro yezvimwe zvinhu kana nekuda kwekuenda kumwedzi. Kana iwe uine HSDD zvisinei nemamiriro ezvinhu, mudiwa, kana kukurudzira, saka chigadzirwa ichi ndeche yako. Kana iwe warasikirwa nezvido zvepabonde pamwe nekuti wakamanikidzwa, wanga uchibatikana nebasa, kana kuti hausisiri munzvimbo dzakanaka nemumwe wako, uyu mushonga hausiri iwo waunoda kugadzirisa matambudziko ako. Izvo hazvina kuitirwa kuti uwedzere kuita zvepabonde, asi panzvimbo pezvo, ndeyekuvandudza mahormone ebonde. Zvakare, hazvifanirwe kushandiswa nevarume.
Ndeipi mhedzisiro yekushandisa Flibanserin?
Chese chinhu chine mapunduwo chine mimwe migumisiro. Iyo huru Kubatsira kweFlibanserin ndeyekuti inopa inoonekwa inovandudza mu bonde drive. Inoshanda zvakakwana seye HSDD kurapwa neese maviri ongororo yesainzi uye anecdotal bvunzo inoratidza kuti inoguma yakawedzera kuda zvepabonde uye kufarira. Nekudaro, mushonga uyu haushande nguva dzose, uye iwe unofanirwa kurushandisa uine pfungwa dzakavhurika. Mushonga uyu hausi kuitirwa kurapwa kweanorasikirwa nechido chebonde nekuda kwemushonga uripo kana humwe hutano kana hutano mumuviri. Zvakare, hazvizobatsire kana iwe urikushandisa mimwe medza inogona kukanganisa chishuwo chako chebonde, senge antidepressant. Iwe unofanirwa kurega chiremba wako akuongorora iwe kutanga kuti uone kana iwe wakafanira kushandisa mushonga uye kana zvichizokushandira.
Haufanire kushandisa mushonga uyu kana uine chero zvinetso zveutano zvakadai sechirwere chemoyo, kukwira kweropa, kana chirwere cheshuga. Iwe unofanirwa kurega chiremba wako akubatsire iwe kugadzirisa zviitiko pakutanga usati washandisa mushonga.
Asati abvumidzwa kushandiswa, zvinodhaka zvinofanirwa kuongororwa neFDA kuona kana yakachengeteka kushandiswa. Nekudaro, ADDYI pakati peiyo mishonga isina kumbobvira yakatemwa zvachose kana yakachengeteka kushandiswa. Mushonga uyu waratidza kuve wakanyanya kubatsira mukuwedzera Libido uye kubatsira avo vakadzi vane akarasikirwa zvepabonde zvido. Yakawanikwa iine huwandu hwekubatsira uye seyakakura saver saver. Nekudaro, iyo FDA yakaona kuti mushonga unouya pamwe nezvimwe zvinokanganisa, zvese kubva muku chizunguzungu, kurara, uye kusvotwa. Izvi ndizvo zvakajairwa Flibanserin mativi, asi iyo FDA yaive nehanya nezvematambudziko maviri akakosha ayo vanhu vanofanirwa kunetseka nezvayo;
Kana ikashandiswa zvisirizvo, mushonga uyu une kusation mhedzisiro, uye vamwe vanhu vanoishandisa nekuda kwezvikonzero zvisiri izvo pavanoyedza kuwana hope dzakadzikama, dzakasimba. Kana izvi zvikaitika, vashandisi vacho vanorara kwemaawa akawanda kupfuura zvavaifanira kuita. Izvi, mukudzoka, zvinokanganisa chibereko chavo kunyanya nekuda kwekushomeka kwekushushikana uye kurara mukati maawa asiri iwo.
Kukundikana nekuda kwekudonha kweropa kudonha
Iyi ndiyo yakaipa mativi mhedzisiro, uye zvinowanzoitika kana mushonga ukashandiswa panguva isiri iyo. Sezvambotaurwa, mushonga unofanirwa kushandiswa panguva yekurara kana kuzorora. Kutungamira mushonga panguva yekumuka kana kana muviri wako uchiratidzika kunoguma nekudonha kweropa uye kunogona kukuita kuti utore simba.
ZVII ZVINYEMBISO zveFlibanserin?
Kana ukapihwa doro, uyu mushonga unogona kukonzera kudonha kukuru kweropa, izvo zvinoguma nekukutukutu, kupera simba uye kusimuka, uye iwe unogona kutotadza nekuda kweizvi mhedzisiro. Zvinokurudzirwa kuti kana iwe uchangotanga kushandisa Flibanserin, iwe unofanirwa kurega kutora doro. Kunyangwe iyo diki diki yedoro inogona kutungamira kune yakataurwa mhedzisiro.
Contraindicated neanonyorera kana yakasimba CYP3A4 inhibitors
Kana ukashandiswa aine YP3A4 inhibitors yakasimba, ungango sangana neFlibanserin yakawandisa, ichaita sekuwedzeredza. Izvi zvichaita, mukudzoka, zvinokuita kuti iwe uve nerutivi mhedzisiro yekuwedzeredza chinhu ichi. Naizvozvi, iwe unofanirwa kucherechedza kuti kushandiswa kweizvi zvinodzivirira zvakabiridzirwa, zvichireva kuti iwe unofanirwa kungoishandisa kana uchimanikidzwa nemamiriro ezvinhu.
Contraindicated mune varwere vane chiropa impairment
Mushonga uyu hauratidzwe kune vanhu vane chirwere chechiropa kunze kwekunge uchibatsirwa nenyanzvi yekurapa. Zvinokurudzirwa kuti utsvage zano kubva kuna chiremba anozokubatsira kudzora kushomeka kwechiropa chako usati watanga kushandisa uyu mushonga. Zvidzidzo zvakaratidza kuti Flibanserin (167933-07-5) yakawedzera kuratidzirwa kune avo vane kushomeka kwechiropa kana ichienzaniswa nevaya vane hutano hunoshanda hwechiropa, zvakavafumura mungozi yakawanda yekukudziridza syncope, hypotension, uye central system system kushungurudzika.
Mimba uye kuyamwa
Hapana zvidzidzo zvakajeka zviri kuratidza kana ichi chigadzirwa chichiisa chero njodzi kune vakadzi vane pamuviri kana muchechetere. Zvinoenderana nekuedzwa kwakaitwa kumhuka, zvakaratidza kuti huturu hwakaitika chete pamberi pehutachiona hweamai. Mimwe mhedzisiro panguva yakadaro inosanganisira kuwana uremu, kukotsira, uye kutiza. Mhuka dzakarara zvakanyanya kupfuura zvadzo. Dzimwe dzemhuka dzakawana kubereka uye kukura kwemhedzisiro, kusanganisira zvakasarudzika anomalies uye kuderedza uremu.
Ichiri kuzotemerwa kana Flibanserin poda (167933-07-5) ine chero chinokanganisa pakugoverwa kwemukaka wechipfuva wevanhu, uye hazvizivikanwe kuti zvine zvazvinoita pavacheche vanoyamwiswa. Zvidzidzo zvakaitwa pamakonzo zvakaratidza kuti mushonga wacho wakadzururwa mukaka weti. Neizvi, zvakachengeteka kutaura kuti kushandiswa kweFlibanserin kana uine nhumbu kana kuyamwisa zvinokonzeresa zvinokanganisa vakadzi vanoyamwisa senge sedation, uye izvi zvinogona kukanganisa vacheche vanoyamwiswa.
Flibanserin kunogona kuderedzwa uremu
Maererano nekuongororwa kwakawanda uye post hoc kuongororwa, postmenopausal uye premenopausal vakadzi vakashandisa ichi mushonga we hypoactive Zvepabonde chishuwo chekusuwa chinogona kuderera uremu. Ngatizvitarisei. Vakadzi vazhinji vanoziva nezvehuremu hwavo uye vanotya kushandisa chero chinhu chinokanganisa huremu hwavo. Iko kurudziro yakadaro yekusimbisa kuziva kuti kushandisa FLIBASERIN hakuna chero huremu hunowana vanhu, asi pachinzvimbo, kunovabatsira kudurura huremu hwakakura hwehuremu. Kana iwe uchinge uchinetseka nematambudziko ekuremera uye kutsvaga nzira isingaedze yekudurura, uyu mushonga unowedzera.
Tsvagurudzo nezveizvi yakaitwa kusimbisa vakadzi, asi ivo vakachengeteka sezvo vazhinji vavo vachizeza kunwa mushonga uyu. Mazhinji antidepressants anozivikanwa kukonzeresa uremu, uye vakadzi vanotya kuti kurapwa uku kuchave nemhedzisiro.
Nyaya yakazokonzerwa nenyaya yekuti mushonga uyu idiki 5-HT2C reconor 5-HT2C agonist inonyanya kuve nechekuita nekudzikisira uremu, kunge yatenderwa neFDA nekuda kweizvi uye chokwadi icho Flibanserin idiki yakapa vakadzi mafungiro ekuti yaizokonzeresa kuti vawane uremu.
Nzira chete yekufarira zvakanakira mibairo kana iwe buy Flibanserin kubva kumutengesi akavimbika. Nekuwedzera kuri kuda kwechichi chigadzirwa, pange paine kukwira kwevatengesi vanoti vanopa mhando yepamusoro yeFlibanserin. Kunyange vamwe vaine zvaunofarira pamoyo, vamwe vanongotuka vatengi vanopererwa. Iwe unoda kuve nechokwadi kuti iwe unowana icho chigadzirwa kubva kune mupi iwe waunogona kuvimba zvizere. Unogona kunyange kuwana Flibanserin powder kwaunogadzirisa mhinduro usati waironga nemuromo. Tora nguva yako, tsvaga zvakakwana kuti uwane izvo zvakanaka Flibanserin inotengeswa. Zvinodhaka chigadzirwa chakanzwisisika, uye kuwana zvisiri izvo kunogona kuita kuti mamiriro ako ave akaipa kupfuura zvaari.
Flibanserin yakaratidza kuve mhinduro yakanakisa kunevakadzi vakarasikirwa nechido chebonde pasina chikonzero chakakonzera. Nekudaro, iwe unofanirwa kuwana mhando yepamusoro yechigadzirwa ichi uye chishandise zvakakodzera kuti uone zvawanikwa. Zvakare, iwe unofanirwa kuzvishandisa uine pfungwa dzakavhurika uye ona kuti zvingasashanda iwe pamwe nekushandira mumwe munhu. Usakanganwa kuwana kuraira kwachiremba usati watanga kushandiswa kwayo kuti uone kana iwe uri mumiriri akakodzera.
Jane McCall, Mukadzi Viagra Flibanserin: Iyo Yakazara Nhungamiro Yekurapa kweHypoactive Zvepabonde Desire Disorder (HSDD) uye Kuwedzera kweChikadzi Libido Kuwana Intense Orgasm uye Kubvisa Kunzwa Kwekushushikana; 1724181459
Amazon Digital Services LLC - Kdp Dhinda Us, 2018, Pink Viagra (Flibanserin): Bhuku Rinotungamira Kune Vakadzi Kuita Bonde Kuwedzeredza Iyo Inosimudzira Bonde Dhivhiri uye Inobatsira Vakadzi Kuwana Zvakawanda Orgasm, 1729471161
Borsini F, Evans K, Jason K, Rohde F, Alexander B, Pollentier S (2002). "Pharmacology ye flibanserin". CNS Dhigi Dzidziso. 8 (2): 117-42.
Raw Proviron (Mesterolone) mukugadzira muviri, kuenzanisa, uye kufamba
Nzira Yokusarudza Steroids Powder Zvokudya mu 12 Steps
Zvese nezve Oxandrolone (Anavar), unofanirwa kuziva	Mashandiro anoita Pyridoxine hydrochloride (Vitamin B6) kune anovaka muviri